Iminyaka engamashumi amabini yempumelelo | Ilisolezwe
Iminyaka engamashumi amabini yempumelelo
Iindaba / 13 July 2017, 02:00am / Siyabulela Mqikela
UCyril Ramaphosa, Noxolo Kiviet kunye noNgangomhlaba Matanzima, eBhisho Umfanekiso: Siyanda Jantjies
Usihlalo wendlu yeeNkosi ophuma eMpuma Koloni uNkosi Ngangomhlaba Matanzima, uqhayise ngomsebenzi wabo abawenze kule minyaka ingamashumi amabini yasekwayo la ndlu.
Oku kuvele ngethuba bekuqhutywa imibhiyozo yeminyaka engamashumi amabini yasekwayo indlu yeeNkosi zeMpuma Koloni.
Ethetha ingathi uthetha okokugqibela, uNgangomhlaba uqhayise ngozinzo obelukho kula ndlu nokuphucuka kwemeko zokusebenza ukusukela oko bavulayo.
“Sisebenze phantsi kweeNkulumbuso ezintandathu, phantsi kwabaphathiswa abalithoba, kodwa thina sibe nosihlalo ababini kuphela kule minyaka ingamashumi amabini igqithileyo, luphawu lozinzo olo,” uthethe watsho uNgangomhlaba.
Uthi uzinzo kula ndlu lubangelwe kukuqeshwa kwabantu, nokubangele ukuphucuka kwentsebenziswano kunye neeNkosi.
“Bekungekho basebenzi kule ndlu ukungena kwethu, kodwa ngoku sishiya kukho abantu abaqeshiweyo, ndibulela kubo bonke, ingakumbi kuNkosi Mwelo Nonkonyana uMalayipheli, uMhlambi wokulala iintaka,” evakala onwabile, utshilo uNgangomhlaba.
Ukwasebenzise eli thuba ukuvakalisa iingxaki ezambethe indlu yeeNkosi zeMpuma Koloni, ebhekisa kusekela mongameli weli nobekwa yinxalenye yalo mcimbi, uCyril Ramaphosa.
“EMntla Ntshona, eMntla Koloni naseMpumalanga, iiNkosi zineemoto zokuhamba, kumele nalapha kuthi kubenjalo, ezi Nkosi zingamakhulu amabini namashumi amathathu anesithathu mazifumane iimoto sekela mongameli,” uthethe watsho uNgangomhlaba.
Eziphendulela, uCyril Ramaphosa uthembise ukuba uzakuthatha amanyathelo, aqwalasele ukuba ziyafumaneka iimoto. “Ndivile ukuba iiNkosi zalapha azinazo iimoto, ndizakusebenza kuyo loo nto, kodwa andivanga uNkosi Ngangomhlaba ecela ooganda-ganda bokulima, ecelela ezi Nkosi,” uthethe watsho uRamaphosa.
Ukanti zikho iiNkosi ezisebenzise eli thuba, zigxeka ukusilela kolawulo lukaMatanzima ngelithi, makubuye uNkosi uMwelo Nonkonyana.
UNkosi uMthetheli Zibi wamaHlubi eMatatiele, uthi abakhange babone mahluko ngexesha lokulawula kukaNkosi uNgangomhlaba Matanzima.
“Ayikhange inyuke imali yethu siziNkosi phantsi kolawulo lwakhe, yilo nto simemelela ukuba kubuyiswe uNkosi Mwelo Nonkonyana, kuba ngexesha lakhe sibone uzinzo kumbutho weContralesa, kwaye nguye owasisungulela le ndlu yeeNkosi,” utshilo uNkosi Zibi.
URamaphosa ukwancome indlu yeeNkosi eMpuma Koloni ngokuthi ibe yenye yezo zinee-ofisi zayo zokusebenzela.
“Kubangathi ndikwiZakhiwo Zomdibaniso xa ndilapha, intle indawo enisebenzela kuyo, ibonisa impumelelo eniyenze kule minyaka ingamashumi amabini,” uthethe watsho uRamaphosa.
IiKumkani zeli leMpuma Koloni zibone inguqu emandla ngeli xesha ngokuthi zixhamle nazo ngokufumana iimoto nokuphuculwa kwamabhotwe athile, izibonda nazo zifumene imirholo ngeli xesha lalo msebenzi, itsho ingxelo.